Dacwo: Puntland Oo Kheyre Ku Eedeysay Musuq, Amni Darro iyo Iska Hor Keenista Maamulka iyo Dadweynaha – Goobjoog News
Dowlad goboleedka Soomaaliyeed ee Puntland ayaa ra’isul wasaaraha Soomaaliya Xasan Cali Kheyre waxaa ay ku dacweysay deeq bixiyeyaasha iyo hey’adaha caalamiga ah ee daneeya arrimaha Soomaaliya iyada oo ku eedeysay inuu sameeyey musuq , amni darro iyo inuu abuuray iska hor keenista shacabka iyo madaxda Puntland.
Qoraal uu soo saaray wasiirka maaliyadda ee Puntland, lana soo gaarsiiyey Goobjoog News waxaa lagu sheegay in booqashadii uu ra’isul wasaare Xasan Kheyre ku tagay Puntland ay keentay musuq iyo in la baal maray hey’adaha dastuuriga ah ee Puntland isla markaana uu abuuray isku dir shacabka iyo dowladda Puntland.
Isla qoraalka waxaa lagu sheegay in Puntland ay ka walaacsan tahay sida sharci darada ah ee ra’isul wasaare Kheyre u adeegsanayo hantiada shacabka si uu u abuuro xiisado siyaasadeed iyo amni darro, isaga oo (220,0000) u xawilay NGO ama hey’ado aan dowli aheyn, isaga oo meel uga dhacay dastuurka iyo sharciyada kale ee dalka.
Dr, Xasan Sheekh oo ah aqoonyahan ka faalooda arrimaha siyaasadda oo la hadlay Goobjoog News waxaa uu sheegayaa in Puntland ay caalamka tuseyso in deeqaha loo isticmaalo arrimo aan habooneen“ Arrintan waxaa ay ka dhiban tahay in dowladda Puntland ay tuseyso caalamka in lacagihii loogu talo galay horumarka in loo isticmaalayo dumin iyo isku dirka Puntland”.
Dr. Xasan oos ii hadlaya waxaa uu yiri “Waxaa ay dhaawaceysaa sumcadda ra’isul wasaare Xasan Kheyre, waxaa kale oo sii kala fogeyneysaa xiriirka Puntland iyo dowladda federaalka ah”.
Waare Oo Kulamo La Leh Waxgaradka Degmada Buuloburde, Hiiraan
Somaliland: Duufaanta Oo Sababtay Internet La’aan
Madaxweyne Xaaf Oo Sheegay In La Furayo Waddooyinka Xiran Ee Magaalada Gaalkacyo
Popular Pills Online Buy Priligy Usa [url=http://cialibuy.com]Cialis[/url] Sildenafil Citrate Ripoffs
Rfxeye melhou buy viagra cheap online cialis daily cost
Prof. Dalxa: Gaabis ayaa ku yimid gargaar u fidinta barakacayaasha
Hchavh lxrfem canada pharmacy Ofsfi...
Cvjcmt jmsrew canadian pharmacy Rfmze...
Euzkuo jgqaib walmart pharmacy Ifumj...
Levsqv oqzoyz canada pharmacy Coahs...
Rtuatk uifzei pharmacy online Ohhsg...